RRI Webinar Series: Fivarotana trano ho an'ny fividianana trano ho an'ny paikady famoronana torolalana Guam | Hanan-dranomasina
Ny mpandrindra ny Coral Reef Resilience ho an'ny Governemantan'i Guam, Whitney Hoot, dia mitondra antsika ao ambadiky ny seho amin'ny paikadin'ny Guam Reef Resilience: ny fomba namolavolana azy, namboarina ary napetraka mba hanangonana ny fampidirana tsikombakomba ary hanorina fanohanana amin'ny fampiharana. Mandritra ity fanoloran-tena 30 min ity, hizara ny eritreritra "fandresena" ary lesona ianarana avy amin'ireo dingana telo ity i Whitney.
The misokatra amin'ny varavarankely vaovaoPaikadin'ny tanjaky ny vatohara Guam Coralmanokatra fisie PDF (GRRS) dia rafi-pandrafetana sy stratejika hitarika ny fitantanana ny haran-dranomasina ao Guam. Ny tanjon'ny GRRS dia ny famahana ny fahasahiranana eo an-toerana ary ny fampivoarana ny tontolo iainana sy ny fiarahamonina haran-dranomasina ao Guam ary ny fiarahamonin'olombelona amin'ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetran'ny taona 2025. , fikambanana tsy mitady tombony ary orin'asa tsy miankina. Tamin'ny Jona 56, ny Governemanta Guam dia nanangana tamin'ny fomba ofisialy ny GRRS, ary nitaky ny fampiharana azy avy hatrany.